ढिला भयो आतंकबादी बन्न, आउनुहोस् हामी सबै आतंकबादी बनौ - उत्तम भण्डारी - Nepali Labour Unity
Home विचार/दृष्टिकोण ढिला भयो आतंकबादी बन्न, आउनुहोस् हामी सबै आतंकबादी बनौ – उत्तम भण्डारी
ढिला भयो आतंकबादी बन्न, आउनुहोस् हामी सबै आतंकबादी बनौ – उत्तम भण्डारी
✍️ उत्तम भण्डारी, युएई
समय एकदम कम छ, राजनीतिक खिचातानीको बिच कसले कहिले पास गर्ने र गराउने भन्ने होड बाजि चलेको ” मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ” (MCC) सदन पास हुने अन्तिम तयारीमा छ । एमसीसीको बिरोधमा कोहि बोले मात्र पनि पक्राउ गरि जेल कोच्ने भनी काङ्रेस सभापती देउबा नेतृत्वको सरकारका गृह सचिबले बिज्ञप्ति नै निकालेर आधिकारिक रुप मै एमसीसीको विरुद्ध नबोल्न ह्विप जारि गरिसकेको छ । केही बिकाउ मिडियाहरु र रेडियो टेलिभिजनहरुमा एमसीसीको फाइदै फाइदा देखाएर बिज्ञापन बजाउन थालिसकेका छन् । यसको सिधा अर्थमा आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्ने मोडमा अहिलेका चल्तापुर्जा नेता भनिएकाहरु नै देखिन्छन् ।
के वास्तवमै अमेरिकी सरकारले गरेको ५६ अर्ब सहयोगले देशको कायापलट नै हुने हो त ? के यो भन्दा अघि नेपाल सरकारले ५६ अर्ब या सो बराबरको रकम कहिलै अनुदानमा पाएको छैन ? यदि पाएको छ भने देश किन कायापलट भएन ? किन ? मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन न नेपालको हितको लागि हो न त कुनै बिकास सम्बन्धी आयोजना हो, हो त आफ्नो घर जलाएर खरानी बेच्ने अबसर मात्र । जहाँ जहाँ अमेरिकी साम्राज्यबादी पुगेका छन् त्यहाँ कुनै न कुनै बहानामा गृहयुद्ध नभएको रेकर्ड छैन । यदि अमेरिकाले गरेको बिकास नै हेर्ने हो भने रुवान्डा र अफ्रिकी मुलुक कङ्गो अमेरिकी सरकारद्वारा कायापलट गरिएका राज्यको प्रथम नमुना देशहरु हुन् ।
के पछिल्लो समय इराक इजरायल प्यालेस्टाइनलाई हेर्दा भएन र ? स्मरणशक्ति अझै कमजोर भए अफगानिस्तान त याद गर्न सकिएला नि ? तर यसो भन्दै गर्दा एमसीसीका केही छिटफुट अवसर प्रदान नगरेको भने होइन । देशभक्त नेपाल आमाका छोरा जो यी रास्ट्रघाती दलालको ( भौतिक शरीरको सुरक्षामा खटिएका छन् ) तिनीहरुलाई कन्चटमा गोलि ठोकेर रास्ट्रबादी कहलिने अवसर प्रदान गरेको छ । यी रास्ट्रघाती दलालको हलाल गरेर देश र जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूत गरि एक पुन्यको काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । एमसीसीले नगरेको होइन धेरै कुरा गरेको छ । श्रमिक र लगानिकर्ता बिचको दुरि बढाइ श्रमिकहरुको लागि कुनै भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरि सङठित बनाएर भएका कलकारखानामा ताला ठोकेर देशभित्र भएका उत्पादनलाई बन्द गरि बिदेशी उत्पादन भित्र्याएर महँगो बस्तु आयात गर्न बाध्य पार्ने दलाल चिन्ने अबसर प्रदान गरेको छ । कलकारखाना निजीकरणका नाममा भएका राज्यको सम्पती निमिट्यान्न पारी नामोनिशान मेटाएर कर्मठ युवा जनशक्तीलाई समयमा पिउने पानी नपाउने मरुभुमी सम्मको यात्रा तय गराउने दलाल चिन्ने अवसर दिएको छ ।
त्यसैले अमेरिकी साम्राज्यवादी दलालको पाइला जब नेपालमा पर्छ, जो कोहि आतंकबादी बन्नै पर्ने बाध्यता आइपर्छ । यी साम्राज्यबादी दलालहरुको नजरमा हामी आतंकबादी साबित भैसकेका छौ । त्यसैले अब सबै नेपाली जनता ढिला नगरी आतंकबादी बन्नुपर्छ । आतंकबादी बन्न तयार रहनु पर्दछ । मरणको पनि किसिम हुन्छ शिर ठाडो पारी माथामा गोलि खाएर मर्नु र खैरेको बुटले खुल्चियर मर्नुको अनुमान लगाएर मनमनै सोच्नुस् त । अब ढिला नगरी आतंकबादी बनौ र अरुलाई पनि आतंकबादी नै बनाऔ ।
लेखक :- उत्तम भण्डारी नेपाली मजदुर एकता समाज युएई समितिका महासचिव पनि हुन् ।